Lost Girls(2020) – Channel Myanmar
IMDB: 6.5/10 6008 votes
မာရီဂီးလျဘတျသညျ သမီး ၃ယောကျအတှကျ ရုနျးကနျနရေသော မုဆိုးမတဈယောကျ ဖွဈသညျ။ အငယျဆုံးသမီးမှာ စိတျကနျြးမာရေး ခြို့ယှငျးခကျြရှိပွီး အကွီးဆုံးသမီးမှာ တခွားမွို့တှငျအလုပျလုပျ နသေညျ။ တဈရကျတှငျ သမီးကွီး ဖွဈသူ ပြောကျနကွေောငျး ကွားသိလာရသောကွောငျ့ သမီးကွီး အပေါငျးအသငျးမြားထံ သှားမေးမိသညျ။ ထိုအခါမှ သမီးကွီး ပြောကျဆုံးမှုမှာ သှေးရိုးသားရိုး မဟုတျသညျ့ အပွငျ မိနျးကလေး တခြို့လညျး ထူးထူးဆနျးဆနျး ပြောကျဆုံးကွောငျး သိလာရသညျ။
သမီးပြောကျမှုအတှကျ သကျဆိုငျရာကို အကွောငျးကွားပမေယျ့လညျး
ကွောငျ့ မာရီဂီးလျဘတျအတှကျ သမီးဇောနဲ့ အရူးတဈပိုငျးဖွဈရပါတယျ…
ဒါပမေယျ့ သမီးအတှကျ သူမဟာ ပူဆှေးနမေယျ့အစား အစှမျးကုနျရှာဖှဖေို့ ကွိုးစား
သမီးလေးကို ရှာတှနေို့ငျပါ့မလား…. ထူးဆနျးစှာပြောကျဆုံးနကွေရတဲ့နောကျကှယျမှာ
လြှို့ဝှကျသညျးဖို ဇာတျလမျး နှဈသကျသူမြား အကွိုကျတှမေ့ညျ့ ဇာတျကားဖွဈသညျ။
ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျသူကတော့ Ko Myo ပဲဖွဈပါတယျ…..
မာရီဂီးလ်ဘတ်သည် သမီး ၃ယောက်အတွက် ရုန်းကန်နေရသော မုဆိုးမတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ အငယ်ဆုံးသမီးမှာ စိတ်ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းချက်ရှိပြီး အကြီးဆုံးသမီးမှာ တခြားမြို့တွင်အလုပ်လုပ် နေသည်။ တစ်ရက်တွင် သမီးကြီး ဖြစ်သူ ပျောက်နေကြောင်း ကြားသိလာရသောကြောင့် သမီးကြီး အပေါင်းအသင်းများထံ သွားမေးမိသည်။ ထိုအခါမှ သမီးကြီး ပျောက်ဆုံးမှုမှာ သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်သည့် အပြင် မိန်းကလေး တချို့လည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ပျောက်ဆုံးကြောင်း သိလာရသည်။
သမီးပျောက်မှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားပေမယ့်လည်း
ကြောင့် မာရီဂီးလ်ဘတ်အတွက် သမီးဇောနဲ့ အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်ရပါတယ်…
ဒါပေမယ့် သမီးအတွက် သူမဟာ ပူဆွေးနေမယ့်အစား အစွမ်းကုန်ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစား
သမီးလေးကို ရှာတွေ့နိုင်ပါ့မလား…. ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေကြရတဲ့နောက်ကွယ်မှာ
လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဇာတ်လမ်း နှစ်သက်သူများ အကြိုက်တွေ့မည့် ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Ko Myo ပဲဖြစ်ပါတယ်…..
File Size : (900 MB) and (341 MB)
Genre : Mystery , Drama, Thriller
Translated by Ko Myo
Option 1 drive.google.com 900 MB WEB-DL 720p
Option2drive.google.com 341 MB 360P
Option3Soliddrive.co 900 MB WEB-DL 720p
Option4Soliddrive.co 341 MB 360P
Option5fastload.cc 900 MB WEB-DL 720p
Option6fastload.cc 341 MB 360P
Option7megaup.net 900 MB WEB-DL 720p
Option 8 megaup.net 341 MB 360P
Option9disk.yandex.com 900 MB WEB-DL 720p
Option 10 disk.yandex.com 341 MB 360P
Option 11 mega.nz 900 MB WEB-DL 720p
Option 12 mega.nz 341 MB 360P
Option 13 mirrorace.com 900 MB WEB-DL 720p
Option 14 mirrorace.com 341 MB 360P
Option 15 1fichier.com 900 MB WEB-DL 720p
Option 16 1fichier.com 341 MB 360P
Oba: The Last Samurai ( 2011 ) 2011
End of Sentence (2019) 2019
The Battle: Roar to Victory(2019) 2019
W.E. (2011) 2011
Batla House (2019) 2019
The Mermaid ( 2016 ) 2016
I Think We’re Alone Now(2018) 2018
Journey’s End (2018) 2017